Bathwale kanzima abasakazi ngenxa yedlozi
UZUKISWA “Zookey Zarling” Vutela osenguNdlovukati Dumizulu Isithombe:FACEBOOK
Charles Khuzwayo | October 2, 2021
ABASAKAZI besifazane okunguDineo Ranaka noZukiswa "Zookey Zarling" Vutela, badalule ukuthi sebengabelaphi bendabuko futhi banamagama amasha.
UDineo owethula uhlelo lwasekuseni kwiMetro FM olubizwa ngeThe Bridge, udalule ukuthi igama lakhe elisha nguGogo Somahashe.
Kanti uZookey oshayela uhlelo lwantambama kwiRise FM, iThe Drive with Zookey and Lily, ubhale kwiFacebook ukuthi igama lakhe lasedlozini, usenguNdlovukati Dumizulu.
Ekhuluma kwi-Instagram uDineo, uthe ulwe kanzima ezama ukuphikisana nesipho sakhe sabantu abadala ngenxa yenkolo yakhe kusukela eminyakeni engu-17 eyedlule. Uthe okumphoqe ukuba amukele lolu bizo, wukuthi ugulile waze wabangwa nezibi egqigqa nasezibhedlela kodwa odokotela nabahlengikazi bengaboni ukuthi uphethwe yini.
Ngokusho kukaZookey, ngaphambi kokuthi amukele idlozi, uke wathwala kanzima. "Ngashizila, ngagula futhi ngalahlekelwa okuningi. Ngichithe iminyaka ngibaleka. Ngilahlekelwa.. ngixoshwa.. ngihlekwa. Ngiqanjelwa amanga kwithelevishini nasemsakazweni ngozakwethu ebebefika bezocela usizo noma bezohlekisa ngami. Ngalokhu ngibathethelela kodwa kungekho oxolisayo," kulandisa uZookey ngohambo lwakhe lokungena yidlozi.
Uthe kunesikhathi lapho abethi ufuna usizo kubantu ayebasiza kodwa bengazibambi izingcingo zakhe. "Ithongo lami lingifuna izinto eziningi njengokuthi ngingabe ngisabizwa ngoZookey Zarling noma ngoMom Cool...Abanye abantu bebethi uma bengibona babone ugogo."
Ubonge kakhulu kubantu abadala ngokumvumela ukuba azelaphe yena uqobo, ngaphambi kokwamukela ubizo. "Bengazi ukuthi bangiphe amandla ukuze ngibuyelwe amandla nomcebo obusungilahlekele," kusho uZookey.
UDineo uthe ukuthwasa bekungesiyo into elula ngoba bekufuneka kwesinye isikhathi azikhohlwe ukuthi ungubani negama lakhe aselakhe iminyaka. Uchaze kanje ngobizo lwakhe: "Bekudingeka uzikhumule usale unqunu ukuze ube nemvelo. Besichitha isikhathi esiningi ezintabeni, simba imithi futhi sifundiswa ukuthi isetshenziswa kanjani."
UDINEO Ranaka osenguGogo Somahashe Isithombe:INSTAGRAM
Uqhube wathi useyakwazi ukwelapha abantu ngezwi nangemishanguzo yemvelo.
Labo saziwayo balandela ezinyathelweni zabanye okubalwa abalingisi, abaculi nabethuli bezinhlelo; njengoBoity Thulo, L'vovo Derrango, Letoya Makhene weGenerations The Legacy, Kelly Khumalo, Somizi Mhlongo, Babe Cele woZalo, Luyanda Potwana weNyan Nyan, Mlungisi Mathe weSkeem Saam, umethuli wezinhlelo zethelevishini uZola Hashatsi, obengumsakazi weMetro FM uMasechaba Khumalo, Oratile Maitisa weSkeem Saam, Lerato Mvelase obekwiSibaya nabanye.